Qunfeng Intelligent Makiinado Co., Ltd. waxa lagu daray 1995 iyo waxaa ka go'an in ay cilmi-baarista, horumarinta, soo saaridda, qaybinta iyo adeeg ee mashiinada wax dhismaha sida mashiinada line block qaadashada la taaban karo, line-soo-saarka block AAC iyo daaweynta qashinka dhismaha. Iyadoo in ka badan 20-ka sano ee dadaalka joogtada ah ee ku dadaalaya si kaamil ah horumarinta iyo wax soo saarka, Shirkadda waxay bixisaa dhismaha caalamka la aasaaska xarunta lagu hagaajinayo ay tartan core by dhammaataan shanleeyo aragtida ah ee "technology caaqil" la aragtida ah ee "oolnimada sare iyo deegaanka saaxiibtinimo ".
Innovation System Global The
Waxaan mar walba qaataan kor u qaado horumarka magaalada la technology caaqil. Sida our repsonsibility ugu muhiimsan / Our farsamo R & D-howleed ka kooban yahay 100 xirfadlayaasha sida farsamaysan, Haydarooliga, wax electronic iyo dhismaha ee beeraha. Waxaan ka dhigay laba hay'adaha cilmi-baarista iyo aasaasay a iskaashiga istaraatiijiyadeed wanaagsan leh ugu jaamacadaha Chinese caanka ah iyo hay'adaha cilmi-baarista. Waxaan u firfircoon ee qorista iyo sixitaan ee darsin ka badan ee heerarka qaranka iyo warshadaha wax soo saarka. Waxaan ku guuleystay in ka badan 200 shatiyada, waayo, been abuurtay, utility iyo design iyo sidoo kale saddex qiimayn hanashada farsamada ee gobolka.
Nidaamka manfacturing dunida
Iyada oo maalgashi guud ee 45 million RMB, Qunfeng dhiso 'Fujian Qunfeng Makiinado Co., Ltd. " iyo 'Qunfeng Industrial Park ee Nan'an Binjiang qalabka saldhig saarka ee 2008, taas oo uu bilaabay brand Zaman caaqil cusub. Park warshadaha degan guud ahaan 215,000 mitir murabac oo la xaddi meesha lagu tumo guud ee 145,000 mitir oo laba jibbaaran. Ka faa'iidaysanaya ay awood dhaqaale oo xoog badan, Qunfeng ayaa soo bandhigay noocyo kala duwan oo qalab gudaha iyo dibada sare processing oo ay ku jiraan xarunta processing CNC, alxanka robot, qalabka daaweynta kulaylka si buuxda u-iswada, mashiinka goynta laser iyo mashiinka plasma olol-goynta CNC ah. Iyada oo hal-abuurnimo joogto ah, iskaashi lala heshiiyo ganacsatada oo heer caalami ah, iyo is-dhexgalka khayraadka oo tayo sare leh oo caalami ah, Qunfeng ayaa noqday, waxay horyaal u caqli badan tiknoolaji iyo bey'ada saaxiibtinimo oo duurka ku ah Shiinaha wax dhismaha beerta mishiino ay design wax soo saarka fiican oo heer sare, xoog iyo tayada wax soo saarka xoog badan iyo sidoo kale adeeg heegan iyo daacad ah.
Sida ganacsi model of China wax dhismaha mishiino ah, Qunfeng siisaa mashiin tayo sare-qaadnaa iyo technology caqli macaamiisha ay. Daboolaya lix qaaradood la 7 xarumaha adeega dibada iyo 24 xafiisyada gudaha, Qunfeng ayaa u adeegeen 8000 macaamiisha ka 110 dal iyo gobollada qalabka wax soo saarka caaqil ku ool ah. Qunfeng kasbatay sumcad weyn adduunka iyadoo badeecada la dhoofiyo suuqa heer sare ah dunida oo dhan, waxaa ka mid ah Asia, Europe, South America, Oceania, Africa iyo North America.
Duruus sharifaad iyo Awards
Inta lagu jiro cilmi baadhis ka badan 20 sano iyo ka hor abuurta, Qunfeng had iyo jeer ku hayaa dareen xoogan oo masuuliyad bulsho iyo sida uu helay ammaantaada sare oo taageero ka helaya xukuumadda iyo bulshada la ruuxyada "Integrity, Innovation, Karti iyo Iskaashiga" ay. Qunfeng ayaa qaatay noocyada kala duwan ee ay ku jiraan caddeyn nidaamka tayada maaraynta, nidaam maamulidda deegaanka, OHSMS, IPMS, maamulka simayo saarka amniga iyo hub qaranka iyo maamulka tayada qalabka. Qunfeng ayaa ku guuleystay badan oo abaalmarinta, sida "National Shuclada Barnaamijka Key Enterprise High-casriga ah", "Property Unit Pilot Intellectual National", "Enterprise Gobolka Wanaagsan oo Cusub", "Engineering Technology Research Center ee gobolka taaban karo Dhismaha Qalabka U samaynta Enterprises", "Gobolka caan Astaanta", "Gobolka caan Brand Products", "Gobolka Enterprise Well-yaqaan", "Gobolka International oo caan ku Brand", "Gobolka Product Macaamiisha-qanacsanaanta" iyo "Warshadaha iyo Informatization Integrated Model Enterprise".
Sharaf iyo filayo, Qunfeng wadi doontaa in ay ku adkeyso on qiimaha asaasiga ah ee mustaqbalka la Sirdoonka iyo Innovation, iyo shuqulka dhammaynaya howlgalka weyn oo dhisiddii magaaladii dhawrista miyir iyo dhismaha bulshada saaxiibtinimo deegaanka-teknoolajiyada.